I-TikTok yeAmazon ifumana: iiMveliso zoKwabelana eziBalulekileyo | XperimentalHamid
I-TikTok yeAmazon ifumana: iiMveliso zoKwabelana eziBalulekileyo
Matshi 23, 2021 by UKainat Maqsood
Ngaba ungumlandeli we #amazonfinds? Ukuba uyakonwabela ukukhangela kunye nokufuna imisebenzi enomdla njengam, ke olu luhlu lweyona "Amazon ifumana iToktok" ilapha ukukunceda ungene kula ma-Amazon Hauls kwaye wabelane ngeTikTok yakho kunye ne-hashtag #amazonfinds.
Ngale ndlela, uya kufumana yonke iAmazon Ought eyaziwayo kwindawo enye kwaye uphephe ukumosha imali yakho njengoko ndenzile.
I-TikTok indifundise izinto ezimbalwa, kunye nendlela yokulungelelanisa ikhaya lam kunye nokuphola kwefashoni. Ndingazibukela iividiyo ezikwi-app kangangeeyure kwaye ndifunde ngezinto ezipholileyo ekufuneka ndizithengile.
Ngexesha lokuntywila nzulu kutsha nje, ndiye ndafumana ukubulawa kwabasebenzisi bexhalaba malunga nokulinganisa ezona zinto bazithengileyo kutshanje eAmazon, kwaye andikwazanga kuyeka ukubukela.
Ukuba uphumelele ekufundeni ngakumbi, qhubeka ufunda. Ndenze uluhlu lweevidiyo zam endizithandayo kunye nezinye iimveliso onokuzithenga.
Ezi zinto zifunyanisiweyo zivela kwiimoto ezipholileyo ukuya kwisanitizer yefowuni kunye nebhola yokwenza i-ayisikhrim, kwaye ngokuqinisekileyo ziya kwenza ubomi bakho bube lula okanye bonwabe ngandlela thile.
Jonga ezi ngcamango zinobuqili kwaye uzilungiselele. Sele sibukele yonke i-TikTok's amazon ifumana iividiyo kwaye siqulunqe inkcazo eneenkcukacha ze-TikTok's amazon ifunyenwe ukuze unganyanzelekanga.
Zeziphi iiTikTok eziPhambili zeAmazon ezifumanekayo
Uluhlu lweTikTok iAmazon lufumana
Isimbozo seNewWay Mini ye-UVC yamazinyo
IPELY Universal Car Vehicle Back Seat Headrest kwendawo yokuhlala
Uthando lukaSpell oluCociweyo
Ukuphelisa iBar Soap Iseti yeeSepha zeVegan
I-BeauteHacks Ukufuma kunye ne-Collagen Booster yokulala imaski yemilebe
Ngoku ungazithenga iimveliso obukade uzifuna kwi- "TikTok Amazon Ifumana" kwaye mhlawumbi wenze eyakho iTikTok iAmazon ifumana ividiyo.
Ngenxa yoko, ukukhangela kwakho ikhaya kuye kwandiswa. Jonga yonke into nganye kwi-TikTok yethu amazon ifumana uluhlu ngokuskrolela ezantsi. Enkosi kakhulu.
Unokufumana naluphi na uhlobo lwemveliso okhe wanqwenela ukufumana. Kunokuba nzima ukufumana ezona zinto zibalaseleyo kwiAmazon kuba le yindawo yentengiso enkulu enokhetho oluninzi.
Ngethamsanqa, olu luhlu luqokelele zonke izinto ezilungileyo zeAmazon kwindawo enye! Jonga olu luhlu lungezantsi! Jonga "iTikTok Amazon ifumana" uluhlu olupheleleyo.
Ukuya kuzithengela buqu ngoku kusemngciphekweni njengoko sonke sinokubona ubhubhane usasazeka kakubi kwaye wenza nomonakalo kubomi bethu.
Ukufumana imveliso efunekayo kwiAmazon yeyona ndawo ifanelekileyo onokufumana kuyo nantoni na ofuna ukuba nayo ngamaxabiso aphantsi kunye nexabiso eliphantsi ngokubuyisela umgangatho.
Uluhlu luqokelele zonke izinto ezilungileyo zeAmazon kwindawo enye! Jonga olu luhlu lungezantsi! Jonga "iTikTok Amazon ifumana" uluhlu. Sikhankanya apha i-6 TikTok iAmazon ifumene.
Esi sigqubuthelo seNdlela intsha ye-UVC yebrashi yamazinyo inezixhobo ezifanelekileyo zogutyulo, sikunika isibulali ntsholongwane xa usendleleni. Nokuba inobungakanani bayo obuncinci, inokuphatheka kakhulu, njengoko unokuyifaka ngokulula engxoweni yakho kwaye uhambe nayo.
I-IPELY Universal Car Backseat Hanger ilungele uhambo olude kunye namanye amaxesha xa ufuna ukuhambisa ipesenti enkulu yemithwalo.
Le hanger iyiguqula i-headrest yakho ibe yindawo yokugcina ephathekayo apho unokuxhoma yonke into.
Uthando lwespell sesepha luthandeka nge-vegan kwaye alikhohlakele. Isepha ebethiweyo yiAmazon ifumanisa ukuba ilungile kwabo bonwabela ubukrelekrele obuncinci kwindawo yokuhlambela. Kubaluleke kakhulu kuba kunqabile ngakumbi, kucocekile kwaye kubumnene xa kufikwa ekucoceni.
Olu hlobo lwe-matte ekumgangatho ophezulu kufuneka lube lolokugcina i-makeup yakho ihlelekile kwaye ijongeka intle. Esi sicwangciso sokuzilungisa sikunike ukukhulula indawo kwindawo yakho yangasese ngokuphinda kabini njengekhawuntari ngaphezulu kwesinki yakho. Yeyona nto ifanelekileyo onokuyisebenzisa ukuba ufutshane kwisithuba.
Le sepha ekumgangatho ophezulu yokukhutshwa kwesonka yenye yezona zinto zintle kakhulu zeAmazon, kwaye kufuneka ube nayo nayiphi na i-vegan.
Ngaba uyayidela imilebe ekrwada? Le mveliso, kwelinye icala, ikulungele. Ukufuma kunye ne-Collagen Pumping up Sleeping Lip Mask ukusuka kwi-Beautehacks sisigqumathelo sokuhambisa amanzi esibonelela ngokuhlala ixesha elide.
Jonga apha Xabiso TikTok
iindidi Mobile Apps tags Uluhlu lweTikTok iAmazon lufumana, TikTok iAmazon ifumana, Zeziphi iiTikTok eziPhambili zeAmazon ezifumanekayo Post yokukhangela
Isahluko se-1927 Ukutshata kwiNoveli yoSapho lwasimahla kwi-Intanethi
Yintoni Emhlabeni "Impompo yokulayisha umthwalo we-Snapchat"?